Xaalada kufsiga ee Somaliland xal bay u baahan tahay: (Waxa soo saaray: Amplifying civil society voice on GBV coalition members in Somaliland)
Together we can end Violence...
Written on 11/12/2017, 08:42 by maamule
16 days activism against gender-based violence is an international campaign to challenge violence against women and girls. The campaigns...
Dhaqanka Somalida, Asalka...
Written on 17/09/2017, 12:09 by maamule
Gudniinka fircooniga ah (FGM) waa ficil dhaqameed halis ah kaas oo ku lug leh Jarista ama Goynta Qaybta hore ee dibada ee xubinta tarka. Waxa sida...
Origin of FGM in Somali culture...
Written on 17/09/2017, 12:03 by maamule
Female genital mutilation (FGM) is a harmful traditional practice that involves the cutting or removal of the external genitals. It is typically...
Xaalada kufsiga ee Somaliland xal...
Written on 13/08/2017, 12:51 by maamule
Kufsigu waxa uu qayb ka yahay rabashadaha ka dhaca bulshooyinka qaarkood , kaas oo sababa dhibaatooyin badan oo saameyn weyna ku yeesha aminga,...
Rape Status in Somaliland Need...
Written on 13/08/2017, 12:10 by maamule
Rape is a violation of human rights which results health consequence including physical, psychological, and emotional and a serious loss of dignity and...
Somaliland Y-PEER expanding to...
Written on 17/06/2017, 07:10 by maamule
The Somaliland Youth Peer Education Network (Y-Peer) is expanding its presence to be able to reach more young people with the...
Rape: violence against human right...
Written on 27/11/2016, 15:50 by maamule
Rape and other sexual abuse in all its different forms are a violation of human rights with long and short term negative effects on the victims and...
Kufsigu waa Tacadi ka dhan ah...
Written on 27/11/2016, 15:38 by maamule
Kufsigu waxa uu ka mid yahay xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadamah, kaasi oodhaawac weyn soo gaadhsiiya sharafta, caafimaadka iyo maskaxda...
Written on 05/09/2016, 07:31 by maamule
Waxa soo saaray: (Amplifying civil society voice on GBV coalition members in Somaliland) Gudniinka hadda jira ee gabdhuhu waa goo-goynta...
The Health Consequences of...
Written on 30/08/2016, 07:32 by maamule
Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) refers to all procedures involving partial or total removal of the external female genitalia or other...
Published Date | | | Hits: 190
Kufsigu waxa uu qayb ka yahay rabashadaha ka dhaca bulshooyinka qaarkood , kaas oo sababa dhibaatooyin badan oo saameyn weyna ku yeesha aminga, dhaqaalaha iyo caafimaadka bulshada. Kufsigu wuxu ka mid yahay tacadiyada inta badan ku dhaca dumarku iyo caruurta. waxaannu ka dhex dhacaan dhamaan bulshooyinka caalmka oo dhan. Somaliland waxa ay ka mid tahay Waddamada aannu hore uga dhici jirin kufisigu amaba uu ku yaraa , waxa cad in mudooyinka danbe ay soo kordhayaan warbiximaha ku saabsan kufsiga ee ka dhaca dalkeena.
Hayaada Caafimaadka adduunka “WHO” waxa ay qeexaysa in dhamaan cudurada soo socda ay ka dhashan kufsiga markuu dhaco. Cudurada Dumarka, Xanuun ku dhasha Xubinta taranka, Cudurada Galmada, Dhalmo La’aan, Cudurada Miiskaha ku dhaca oo bararka keena, Dhibatooyinka uurka, Dhicis, Xanuunada ku faafa galmada sida HIV/AIDs, Dhawac keena dhimasho, qofka oo isdila, isku-buuq, Xanuuno Joogto ah, Xanuunada Maskaxda, Ilmaha oo layska soo rido, uur aan la rabin oo samaysma.
Dadka ugu badan ee kufsigu ku dhaco waa haweenka kuwaas oo ah qaar u nugul dhibaatada ka dhalata kufsiga, sida ku cad warbixinada illaa hadda laga hayo arrimaha kufsiga waxay qeexayaan in haweenka iyo dadka ku nool goobaha barakacayaasha, qoxoontiga, miyiga, magaalooyinka dhexdooda iyo dadka la hayb sooco ay yihiin kuwa badanaa la kulma kufsiga.
Dhibatooyinka iyo samaynta ka dhalata kufsiga iyo tacadiyada ka dhanka ah sharafta qofka aadamaha ah, waxa ay saameyn weyn ku yeeshaan qofka shaqsinimadisa, sharaftiisa, sidoo kale waxa ka soo gaadha dhawacyo khatar ah kuwaas oo samayn weyn ku yeelata xidhidhka uu la leeyahay bulshadiisa iyo qoyskiisa, waxa ay keenta sidoo kale colaad iyo isku dhacyo ka dhex dhaca bulshada, waxa ay dhalisaa in la takoro qofka dhibanaha ah, waxa ay khal-khal gelisaa isu socodka bulshada iyo wada noolaanshaha.
Ummada Soomaalidu waxa ay leeyihiin xeer dhaqameed ay ku xaliyaan dhibka ka dhex dhaca bulshada, hase ahaate, marka la eego arrimaha kufsiga, xeer dhaqmeedku waa midka ugu badan ee la isticmaalo si xal deg-deg ah looga gaadho sidii loo xalin lahaa arrimaha kufsiga. Hasa yeeshee wuxu noqon kara mid dhawaacaya xuquuqda dhibanaha taas oo keenta in qofkii kufsiga geystay loo guuriyo qofkii dhibanaha ahaa si xal loogu raadiyo mudo kadibna qoyskaasi burburo.
Sidaa awgeed, xeer dhaqmeedku muu noqon mid soo af-jaraya dhibaatooyinka kufsiga ee ka dhaca bulshada dhexdeeda, bulshadu waxa ay u aragtaa in ku xalinta xeer dhaqmeedku sababo soo noq-noqshada iyo kor u kaca tirada kufsiyada dhaca. Hadaba si arrintaas xal waara loogu helo ururada bulshada iyo ha’yadaha dawladda ee u xilsaran arrimaha kufsigu, iyaga oo ka duulaya siyaasadda iyo dastuurka wadanka, waxa ay bilabeen in la hirgeliyo xeer ciqabeed (Xeerka Kufsiga) taas oo ay muhimadiisu tahay in ilaaliya nabad galyada shaqsiga qofka ku gefaana uu u mutaysto ciqaab taas oo lagu ilaalinayo nabad gelyada caamka ah qaranka. Xeerka kufsigu, wuxu ku yimid wadatashi ka dhexdhacay daneeyeyaasha, ee ay ka mid yihin ururada rayidka ah, hay’adaha dawaladda, odaydhaqmeedka, iyo culimada, si ay u abuuraan xeer ciqaabeed lagu fuliyo kiisaska kufsiga ah ee ku soo kordhaya waddankeena. Sharcigani wuxuu ka duulaya sidii loo soo afjari lahaa la xisaabtan la’aanta iyo xad-gudubyada uu keeno Kufsigu.
Gun iyo gebo-gebo xeerka kufsigu wuxu xal u noqonaya in si cadalada ah loo horkeeno qof dhib-gaystaha ah maxkamada dalka. Xeerka kufsigu wuxu mudo badan hor yaala Golaha Barlamanka Somaliland, loona bahan yahay in ay si dhakhso ah u ansixiyaan. Maqaalkani wuxuu fariin u dirayaa golayaasha barlamaanka in aanay iska indha tiri dhibta ku dhacaysa inta aan codkoodu meel gaadhi una baahan hiil cadaaladeed.
Waxa soo saaray: Amplifying civil society voice on GBV coalition members in Somaliland